धर्मपत्नि अञ्जनाको दिर्घायूका लागि व्रत बसे गगन थापा, धेरैले गरे तारिफ ! - Sidha News
धर्मपत्नि अञ्जनाको दिर्घायूका लागि व्रत बसे गगन थापा, धेरैले गरे तारिफ !
काठमाडौं। नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज सम्पन्न भएसँगै अहिले सोही पर्वका केही तस्विरहरुले चर्चा पाइरहेका छन् ।
चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नि एलिजा गौतमले पतिको खुट्टा धोएको पानी पिएको तस्विर सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेसँगै ट्रोलको शिकार बनेकी छिन् । एलिजा ट्रोलको शिकार बनिरहँदा नेपाली कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले धर्मपत्नि अञ्जनाको दिर्घायूका लागि व्रत बसेका छन्।